Kuuriyada Waqooyi iyo Qorraxda
Waxa La Sheegay Iney Dawladda Woqooyiga Kuuriya Wiil U Dirtay Qorraxda, Wiilkaasina Uu Si Nabad Ah Ugu Dul Degey Qorraxda.
Telefishan la yiri waxa leh Dawladda Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegey in wiil 17 jir ah oo la yiraahdo Hung Il Gong uu noqday ban aadmigii ugu horeeyey ee ku dul dega qoraxda.
Telefishanka ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi samaysay wax aduunkoo dhammi ku fashilmay oo ah in la tago qoraxda. Telefishankaasi waxuu ugu baaqay dadka reer Kuuriyada Waqooyi inay soo dhoweeyaan markuu qoraxda ka soo noqdo Hung Il Gong.
Dadka ku xeel dheer safarada hawada sare ayaa ku tilmaamay sheegashada Kuuriyada Waqooyi wax lagu qoslo, waxayna ku tilmaameen been cad oo maamulka Kuuriyada Waqooyi uu u sheegayo dadkiisa.
Waxa kale oo reer Galbeedku aaminsan yihiin iney Kuuriyada Waqooyi ka been sheegto gantaalaha waaweyn ee ay sanad walba soo bandhigaan. Waxay leeeyihiin wax aan gantaalo ahayn oo caag faaliso ah ayey ku sheegtaa gantaalo.
Arinta xiisaha leh ayaa ah markii telefishanku sheegay in safarka lagu tegey qoraxdu uu qaatay afar saacadood keliya, wuxuu kaloo telefishanku intaa ku daray in xili habeen ah lagu beegay safarka Hung ku tegey qoraxda si aanay qoraxdu u gubin. Telefishanku ma sheegin xiliga cirmareenku soo noqonayo.
Dowlada Kuuriyada Waqooyi ayaa ka go'doonsan dunida inteeda badan ka dib markii dowladaha reer Galbeedku ku soo rogeen cunaqabatayno fara badan oo kala danbeeyey.